भारतमा महामारी रोक्न डा. फाउचीले सुझाएका ३ उपाय « AayoMail
भारतमा महामारी रोक्न डा. फाउचीले सुझाएका ३ उपाय
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनका प्रमुख चिकिक्सा सल्लाहकार तथा विश्वभरि चर्चित संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. एन्थनी फाउचीले भारतमा अनियन्त्रित भइरहेको कोरोना संक्रमण न्युनिकरणका लागि तत्काल केही साताका लागि पूरै देश बन्द गर्न सुझाव दिएका छन्।
कुनै पनि देशले आफूलाई पूरै बन्द गर्न चाहँदैन तर भारतको अवस्था यति नाजुक भइरहेको छ कि संक्रमणको चक्र तोड्नका लागि भएपनि भारतले केही साता बन्द गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार यसबाट भारतलाई यो कठिन तथा निराशाजनक स्थितिबाट बाहिर निस्किनका लागि तत्कालिक, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन महत्वको कदम उठाउन समय मिल्नेछ।
डाक्टर फाउची अमेरिकाका बरिष्ठ संक्रामक रोग विशेषज्ञ हुन्। उनले सात अमेरिकी राष्ट्रपतिसँग काम गरिसकेका छन्।
भारतको एउटा अंग्रेजी दैनिक ‘द इन्डियन एक्सप्रेस’लाई दिएको एउटा अन्तर्वार्तामा उनले भारतमा फैलिरहेको संक्रमणको बारेमा निकै गम्भिर र महत्वपूर्ण कदमका बारेमा भनेका छन्।
यदि तपाईं मोदी सरकारको साथमा हुनुहुन्थ्यो भने यतिबेला के गर्नुहुन्थ्यो?
सबैभन्दा पहिले त म यो भन्न चाहन्छु कि म यो सरकारको आलोचनामा सामेल छैन। र हुन पनि चाहन्नँ। भारतले कसरी यो कोरोना संक्रमणलाई सम्हाल्नुपर्छ भनेर मैले भन्नँ चाहन्नँ किनकि त्यो फेरि राजनीतिक मुद्दा बन्नसक्छ।
म यस्तो गर्न चाहन्नँ किनकि म स्वास्थ्य क्षेत्रसँग जोडिएको व्यक्त्ति हुँ, राजनीतिक मान्छे होइन।
तर पनि मलाई यस्तो लाग्छ कि भारत निकै अप्ठ्यारो र निराशाजनक स्थितमा छ। जब तपाईले यस्तो हालतको सामना गर्न परिरहेको हुन्छ त्यो बेला तपाइले तुरन्तै सम्पूर्ण रुपले बिचार गर्नुपर्ने हुन्छ।
सबैभन्दा पहिले त तत्काल आफूले उठाउनसक्ने कदमका बारेमा बिचार गर्नुपर्छ। र यो पनि तय गर्नुपर्छ कि आगामी दुई सातामा तपाई केके गर्नसक्नुहुन्छ?
भ्याक्सिन लगाउनु एउटा उपाय हुनसक्छ। यो अहिलेको अवस्थामा धेरै आवश्यक पनि छ। तर पनि अहिले मानिसका लागि अक्सिजन छैन, अस्पतालहरूमा बेड छैन अनि उपचारका लागि आवश्यक सामग्री छैन। त्यसले यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन। किनकि भ्याक्सिनको प्रभाव त अलि पछिमात्रै देखिन्छ।
अहिले देखिएका समस्याहरूलाई के कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर तत्कालीन समस्या समाधानका लागि लाग्नुपर्छ। मलाई लाग्छ कि यसका लागि तत्काल कुनै आयोग वा आपतकालीन समूह बनाउन जरुरी छ। जसले अक्सिजनलगायत आवश्यक मेडिकल सामग्रीहरूको तत्काल आपूर्ति गर्नसकोस्।
त्यसका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनको सहयोग लिन पनि सकिन्छ।
अरु देश पनि अहिलेको अवस्थामा भारतलाई सहयोग गर्नका लागि अगाडि आउनुपर्छ। किनकि अघिल्लोपटकको महामारीमा भारतले अरु देशलाई सहयोग गर्नका लागि धेरै उदारता देखाएका थियो।
त्यसपछिमात्रै मध्यकालीन उपायका बारेमा सोच्नुपर्छ। जुन उपाय चीनले अपनाएको थियो। जस्तो कि तपाईलाई पनि याद हुनसक्छ दिनले केही दिनमै अस्थायी अस्पतालहरू तयार गरेको थियो। चीनको त्यो अनपेक्षित सफलतासँग दुनिया नै चकित भएको थियो। भारतमा अहिले पनि उपचारका लागि बिरामीले अस्पताल खोजिरहेको अवस्था छ।
त्यस्तै सरकारका सम्पूर्ण अंगहरू अनि संयन्त्रहरूलाई परिचालन गर्न सकिन्छ। जस्तो कि यस्तो संकटका बेला सेनालाई पनि परिचालन गर्न सकिन्छ। अमेरिकाले जस्तै यसमा भारतले पनि तत्काल सेनाको सहयोग लिन सक्छ। अमेरिकाले पनि भ्याक्सिनका लागि नेशनल गार्डहरूलाई परिचालन गरेको थियो।
मलाई लाग्छ यसबारेमा गम्भिर हुनुपर्छ। अस्पताल बनाउनका लागि उनीहरूको मदत लिन सकिन्छ। जस्तो कि सेनाले युद्धका बेलामा तत्काल ‘फिल्ड अस्पताल’ बनाउँछ। एक प्रकारले भन्ने हो भने त यो एउटा युद्ध नै हो। जसमा अहिले भाइरस तपाईं हामी सबैको दुश्मन भइरहेको छ।
र, अन्तमा दीर्घकालीन उपायका लागि सबै नागरिकलाई भ्याक्सिन लगाउन हो। भारतजस्तो देशमा अहिलेसम्म जम्मा २ प्रतिशत नागरिकले मात्रै भ्याक्सिन लगाएका छन्। यो निकै गम्भिर स्थिति हो। जति सक्यो धेरै भन्दा धेरैलाई भ्याक्सिन लगाउनुपर्छ। तत्कालीन समस्या समाधानका लागि तत्कालै लागु गर्न सकिने कदम उठाउनुपर्छ त्यसपछि मात्रै विस्तारै गर्न सकिने योजनाहरूमा काम थाल्नुपर्छ।
के दुनियाभरका लागि यो सुरुवातको संकेत हो?
यसमा कुनै सुरुवातको संकेत हुन जरुरी छैन। यो कुराको महसुस हुनपर्छ कि भाइरसले के के सम्म गर्नसक्ने क्षमता राख्छ। यो भाइरसले देखाइसकेको छ कि यसलाई वेवास्ता गर्ने हो भने केही समयमै सिंङ्गो समाजमा यसले विष्फोटक रुपमा लिनसक्छ। हाम्रो अमेरिकामा पनि यो भइसकेको छ। म एक अमेरिकी हुनुको नाताले यो भनिरहेको छु।
विश्वकै एउटा धनी देश अमेरिका केही समय त कोरोनाबाट दुनियामा सबभन्दा धेरै प्रभावित देश पनि बन्न पुग्यो। त्यसका लागि हामी पर्याप्त तयारी गर्न चुकेका थियौं र नराम्रो तरिकाले प्रभावित भयौं।
यसको मतलव यही हो कि भाइरसले को कति धनी छ वा गरिब छ। कहाँ विकास छ वा छैन भन्ने देख्दैन। त्यसैले उसले पुराउने क्षतिका बारेमा हामीले सोचेनौं भने त्यसको ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ।
भ्याक्सिनलाई कसरी बढाउन सकिन्छ?
भ्याक्सिनको आपूर्ति बढाउनुपर्छ। धेरै भन्दा धेरै खोप कम्पनीहरूसँग सम्झौता गर्नसकिन्छ। अहिले पनि कतिपय कम्पनीहरूले भ्याक्सीन बनाइरहेका छन्। उनीहरूसँग कुराकानी गर्न सकिन्छ।
अहिले भारतले २ प्रतिशत नागरिकलाई मात्रै भ्याक्सिन दिएको छ भन्ने सुन्नमा आएको छ। तपाईंहरुका लागि अझैं लामो यात्रा तय गर्नुपर्ने छ। भारत दुनियाको सबैभन्दा ठूलो भ्याक्सिन उत्पादक देश हो। यस्तो आफ्नो क्षमताअनुसार अझ धेरै काम गर्नुपर्छ। उत्पादनलाई सकेसम् बढाउनुपर्छ।
मलाई लाग्छ कि भारतमा सबैभन्दा पहिला त तुरन्त अस्थायी लकडाउन गर्नुपर्छ। अहिलेका लागि समयमा अक्सिजन, मेडिकल उपकरण, पिपिई तथा स्वास्थ्य सामग्री सबैभन्दा आवश्यक छ र पूरै देशलाई केही समयका लागि लकडाउन गर्दा त्यसको उपलब्धताका लागि काम गर्न सकिन्छ।
एक वर्ष अघि चीनमा पनि यही स्थिति आएको थियो। तर उसले देशलाई पूरै लकडाउन गर्‌यो। अहिले नै हामीले त्यो उपाय अपनायौं भने भोलि फेरि छ महिनाका लागि लकडाउन गर्नै पर्दैन। अहिले नै त्यो संक्रमणको चक्र तोड्न सकिन्छ।
कसैले पनि आफ्नो देश त्यसरी बन्द गर्न चाहन्न तर अहिले नै केही हप्ताका लागि मात्रै भए पनि लकडाउन गरियो भने महामारीको फैलावटमाथि केही नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।